သငျ့ကို အမွနျဆုံးဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အမူအကငျြ့ ၅ မြိုး - 9Style
ခမျြးသာမယျ့ နညျးလမျးဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆငျးရဲမယျ့ နညျးလမျးတှလေညျး ရှိပါတယျ။
ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးကို မသိသေးသူတှကေ ဆငျးရဲစမေယျ့ နညျးလမျးတှကေို ရအောငျရှောငျရှားလိုကျတာနဲ့ ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးကို တဈဖကျကနေ ပွနျလညျကငျြ့သုံးရာ ရောကျစမှောပါ။
အခုဖျောပွပေးမှာကတော့ သငျ့ကို အမွနျဆုံး ဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အမူအကငျြ့(၁၀)မြိုး ဖွဈပါတယျ။ ရှောငျရှားကွပါ။
တဈခြို့တှကေ အသုံးနဲ့အဖွုနျး မကှဲကွပါဘူး။ တဈခြို့ ငှသေုံးအလှနျကွမျးပါတယျ။ ဒီလူတှဟော သခြောပေါကျ မခမျြးသာကွဘူးဆိုတာ သတိခပျြစခေငျြပါတယျ။
တဈခြို့တှကေ ကိုယျရှာတာ ကိုယျသုံးဖို့ပဲဆိုပွီး သဘောထားကာ အရမျးကာရော လြှောကျသုံးတတျကွပါတယျ။ ရှာနိုငျသလောကျ အခြိနျတော့ သုံးရဦးမှာပါဘဲ။ မရှာနိုငျတော့ရငျတော့ ဆငျးရဲခွငျးဆိုတဲ့ဒဏျကို ခံစားရမှာပါ
မအပျစပျသောအရာဆိုတာက တဈခါတလေ ဂုဏျပကာသနတဈခုအတှကျ ငှကွေေးကို ဒလဟောသုံးတာမြိုးပါ။
ဥပမာအနနေဲ့ မွငျသာအောငျပွောရရငျ သုံးနှဈလောကျ နလေို့ဖွဈနတေဲ့အိမျကို သူမြားဆီကနေ အကွှေးခံပွီး ပွနျဖကျြဆောကျတာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အကွှေးအတှကျ အတိုးက ဆပျနရေလို့ အကွှေးနှံနဈနပေါတယျ။
တဈခါတလေ ဘတျဈကားလောကျနဲ့ သှားလို့ရတဲ့ခရီးကို ရှိုးပဲ့တယျဆိုပွီး တက်ကစီပဲ စီးတဲ့အကငျြ့မြိုးပေါ့။ တဈခြို့ကကတြော့ ရခေဲသတ်ေတာ တဈခုရှိနရေကျနဲ့ နောကျထပျ ရခေဲသတ်ေတာတဈလုံး ထပျဝယျတာမြိုး ရှိတတျပါတယျ။
အလှနျဈေးကွီးတဲ့ အစားအစာတှကေိုပဲ နစေ့ဉျလိုလို စားနတောမြိုးပေါ့။ တဈခြို့က ငှကေုနျကွေးကမြားမှ ဂုဏျရှိတာလို့ ထငျတဲ့သူတှလေညျး ရှိပါတယျ။
တဈလလြှငျ ငှကေပျြတဈသိနျးမှာ အတိုးနှုနျး (၂၅)%ကနေ အနိမျ့ဆုံး (၁၀)%အထိ ရှိပါတယျ။ ငှပေမာဏမြားလေ အတိုးပျေါအတိုးဆငျ့ပွီး ဆငျးရဲတှငျးနဈလပေါဘဲ။
ငှကေို အတိုးနဲ့ယူသုံးတာက လကျတလော အဆငျပွနေိုငျပမေယျ့ ရရှေညျမှာ အဆငျမပွနေိုငျဘူးဆိုတာ ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျဖို့ လိုပါတယျ။
(၅) လောငျးကစားနဲ့ အပြျောအပါးမကျခွငျး….
တဈခြို့တှကေ ငှစေကွေးစလေး ရှငျလာပွီဆိုရငျ တဈထိုငျတညျးနဲ့ ပိုကျဆံဂဏနျးငါးလုံးလောကျ အသာလေးကုနျနိုငျတဲ့ ဘီယာဆိုငျတို့၊ ကတေီဗှီတို့၊ မာဆကျတို့ကို မကျြစောငျးထိုးခငျြကွပါတယျ။
တဈခြို့က ဒီလိုမဟုတျပဲ ငှမြေော ငှနေဲ့လိုကျ-ဆိုပွီး လောငျးကစားကို ဝါသနာထုံကွပါတယျ။ လောငျးကစားဆိုတာ ဘယျတုနျးကမှ လူကို သုခတရားတှေ ပေးစှမျးတာမြိုး မရှိပါဘူး။
တဈခြို့အကြိုးပေးတယျဆိုတာ လောလောဆယျ ကံလိုကျနလေို့ပါ။ လောငျးကစားသမားတှအေမြားစုကို ကွညျ့လိုကျပါ … ဘယျသူက လူမှေးလူရောငျ ပွောငျလို့လဲ။
ဒီလိုပဲ တဈခြို့က ငှရှေငျပွီဆိုရငျ မိနျးမဘကျကို လှညျ့တတျကွပါတယျ။ အပြျောအပါးဘကျကို လှညျ့တတျကွပါတယျ။ အဲဒီလိုမိနျးမဆိုတာ ငှကေ ဘယျခလုတျကို နှိပျရငျထှကျတယျဆိုတာ သိပွီးသား မိနျးမလညျတှကေ မြားပါတယျ။
နောကျ ရောဂါဘယ ကူးစကျမှုရှိ၊ မရှိကလညျး စိတျမခရြပါဘူး။ သငျ့အတှကျ ဆငျးရဲတှငျးနကျစမေယျ့ အမူအကငျြ့တှမေို့ ရှောငျရှားဖို့ လိုပါတယျ။
သင့်ကို အမြန်ဆုံးဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့် ၅ မျိုး
ချမ်းသာမယ့် နည်းလမ်းဆိုတာ ရှိသလို၊ ဆင်းရဲမယ့် နည်းလမ်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို မသိသေးသူတွေက ဆင်းရဲစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရအောင်ရှောင်ရှားလိုက်တာနဲ့ ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို တစ်ဖက်ကနေ ပြန်လည်ကျင့်သုံးရာ ရောက်စေမှာပါ။
တစ်ချို့တွေက အသုံးနဲ့အဖြုန်း မကွဲကြပါဘူး။ တစ်ချို့ ငွေသုံးအလွန်ကြမ်းပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ သေချာပေါက် မချမ်းသာကြဘူးဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေက ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ်သုံးဖို့ပဲဆိုပြီး သဘောထားကာ အရမ်းကာရော လျှောက်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ရှာနိုင်သလောက် အချိန်တော့ သုံးရဦးမှာပါဘဲ။ မရှာနိုင်တော့ရင်တော့ ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒဏ်ကို ခံစားရမှာပါ
မအပ်စပ်သောအရာဆိုတာက တစ်ခါတလေ ဂုဏ်ပကာသနတစ်ခုအတွက် ငွေကြေးကို ဒလဟောသုံးတာမျိုးပါ။
ဥပမာအနေနဲ့ မြင်သာအောင်ပြောရရင် သုံးနှစ်လောက် နေလို့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ကို သူများဆီကနေ အကြွေးခံပြီး ပြန်ဖျက်ဆောက်တာတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အကြွေးအတွက် အတိုးက ဆပ်နေရလို့ အကြွေးနွံနစ်နေပါတယ်။
တစ်ခါတလေ ဘတ်စ်ကားလောက်နဲ့ သွားလို့ရတဲ့ခရီးကို ရှိုးပဲ့တယ်ဆိုပြီး တက္ကစီပဲ စီးတဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့။ တစ်ချို့ကကျတော့ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ခုရှိနေရက်နဲ့ နောက်ထပ် ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံး ထပ်ဝယ်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။
အလွန်ဈေးကြီးတဲ့ အစားအစာတွေကိုပဲ နေ့စဉ်လိုလို စားနေတာမျိုးပေါ့။ တစ်ချို့က ငွေကုန်ကြေးကျများမှ ဂုဏ်ရှိတာလို့ ထင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
တစ်လလျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းမှာ အတိုးနှုန်း (၂၅)%ကနေ အနိမ့်ဆုံး (၁၀)%အထိ ရှိပါတယ်။ ငွေပမာဏများလေ အတိုးပေါ်အတိုးဆင့်ပြီး ဆင်းရဲတွင်းနစ်လေပါဘဲ။
ငွေကို အတိုးနဲ့ယူသုံးတာက လက်တလော အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။
တစ်ချို့တွေက ငွေစကြေးစလေး ရွှင်လာပြီဆိုရင် တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ပိုက်ဆံဂဏန်းငါးလုံးလောက် အသာလေးကုန်နိုင်တဲ့ ဘီယာဆိုင်တို့၊ ကေတီဗွီတို့၊ မာဆက်တို့ကို မျက်စောင်းထိုးချင်ကြပါတယ်။
တစ်ချို့က ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ငွေမျော ငွေနဲ့လိုက်-ဆိုပြီး လောင်းကစားကို ဝါသနာထုံကြပါတယ်။ လောင်းကစားဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ လူကို သုခတရားတွေ ပေးစွမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။
တစ်ချို့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ လောလောဆယ် ကံလိုက်နေလို့ပါ။ လောင်းကစားသမားတွေအများစုကို ကြည့်လိုက်ပါ … ဘယ်သူက လူမွေးလူရောင် ပြောင်လို့လဲ။
ဒီလိုပဲ တစ်ချို့က ငွေရွှင်ပြီဆိုရင် မိန်းမဘက်ကို လှည့်တတ်ကြပါတယ်။ အပျော်အပါးဘက်ကို လှည့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမိန်းမဆိုတာ ငွေက ဘယ်ခလုတ်ကို နှိပ်ရင်ထွက်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသား မိန်းမလည်တွေက များပါတယ်။
နောက် ရောဂါဘယ ကူးစက်မှုရှိ၊ မရှိကလည်း စိတ်မချရပါဘူး။ သင့်အတွက် ဆင်းရဲတွင်းနက်စေမယ့် အမူအကျင့်တွေမို့ ရှောင်ရှားဖို့ လိုပါတယ်။
စိတျဖိစီးမှု ကငျးဝေးစဖေို့ သငျ့ခေါငျးထဲက လုံးဝထုတျပယျထားရမယျ့ အရာမြား
“ကိုယျ့ဝငျငှကေိုယျရှာပွီး ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတဲ့ မိနျးကလေးတှရေဲ့ စိတျနစေိတျထား…”
ကံနှိမျ့ ကံပိတျ နသေူမြားအတှကျ ကံချေါနညျး ကံ ပိတျရခွငျး အကွောငျးကတော့ အလှနျနကျနဲပါတယျ...
တဈစုံတဈယောကျက သငျ့ကို အရမျး လှမျးနတေဲ့အခါ ဒီအရာတှေ...
လူတွေရဲ့ စိတ်က လူတွေထင်ထားတာထက်ကို စွမ်းအင်ပြင်းထန်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ စိတ်စွမ်းအားတွေဆိုတာ...
Knowledge • video
မွတျစှာဘုရား ပရိနိဗ်ဗာနျဝငျစံခဲ့တဲ့နရောမှာရှိတဲ့ ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောကို ဖူးမြှျောနိုငျကွပါရနျ (...